Yalho: Meydka labo nin oo la gawracay oo laga helay buundo-jiifka tuulada Yalho ee gobolka Bari. – Radio Daljir
Yalho: Meydka labo nin oo la gawracay oo laga helay buundo-jiifka tuulada Yalho ee gobolka Bari.
Yalho, June 25 – Meydka labo nin oo la rumaysan yahay in ay ahaayeen askarta dawladda Puntland ayaa saaka waabarigii lagu arkay duuleedka tuulada Yalho oo ka tirsan gobolka Bari, kuwaasi oo la gawracay.
Labada nin ee saaka maydkooda la helay ayaa lagu dilay hab gawricid ah iyagoo laga gooyey madaxa kaddibna la dulsaaray sida ay Radio Daljir u sheegeen saraakiil ciidan oo ka tirsan dawladda iyo waliba qaar ka mid ah dadka deegaanka.
Wali si rasmi ah uma cadda cidda falkaan gaystay hase ahaatee, waxaa la aaminsan yahay dilka raggaan in ay fuliyeen kooxda uu hoggaamiyo Shiik Maxamed Siciid Atam, oo xiriir dhow la leh kooxda Alshabab ee ka dagaallanta koonfurta Soomaaliya. Waxa jira warar aan ilo rasmiya laga xaqiijin oo sheegaya in ragga maydkooda lahelay ay ka tirsanaayeen ciidamo ay horay si gaadmo ah ugu qabsadeen kooxda uu hogaamiyo Atam oo dagaal dhuumaalaysi ah kula jirta dawladda Puntland.
Dawladda Puntland ayaa soo qaaday meydka labadaas nin, waxaana sarkaal ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland watayna ciidanka soo qaaday meydkaasi oo lagu magacaabo Ibraahim Maxamed Faarax uu Daljir u sheegay in uusan hayn wax caddaynaya raggani in ay ka mid ahaayeen askarta dawladda, aysanna jirinba askar ka maqnayd Puntland oo la tawsanaa.
Sarkaalkani waxaa uu intaasi ku daray in ay wadaan baaritaanno dheeraad ah oo la xiriira dilka raggan iyo cidda ay ka tirsanaayeen wakhti dhawna ay kala caddayn doonaan.
11-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay ayey ahayd markii ciidamada uu hoggaamiyo Shiikh Maxamed Siciid Atam ay la wareegeen fariisinkii ciidamada dawladda Puntland ee tuulada Galgala iyagoo halkaasi ku dilay askar ka tirsan dawladda, sidoo kalena gubay gaadiidkii ciidanka, waxaana xilligaasi la sheegayey in jireen dad ay taxaabteen inkastoo dawladdu warkaasi ay beenisay.
Wixii ka soo kordha warkaan mardhaw ayaan idiin soo gudbin doonaa alle idinki.